Shoes & Accessories :: Men Shoes :: [VANS] Core Classic Old Skool Sneakers
Home/Shoes & Accessories/Men Shoes/[VANS] Core Classic Old Skool Sneakers
Colour : BIRCH/TRUE WHITE SEA FOG/TRUE WHITE ESTATE BLUE/TRUE WHITE OCHRE/TRUE WHITE DESERT SAGE TRUE WHITE HOT SAUCE/TRUE WHITE FALCON/TRUE WHITE DEEP GRASS GREEN/TRUE WHITE
US Size : 4.5 Boys =6Women5Boys = 6.5 Women 5.5 Boys =7Women6Boys = 7.5 Women 6,5 Men = 8 Women7Men = 8.5 Women 7.5 Men =9Women 8 Men = 9.5 Women 8.5 Men= 10 Women9Men= 10.5 Women 9.5 Men= 11 Women 10 Men= 11.5 Women 10.5 Men= 12 Women 11 Men= 12.5 Women 11.5 Men= 13Women 12 Men= 13.5 Women 13 Men= 14.5 Women 14 Men= 15.5 Women 15 Men= 16.5 Women 16 Men= 17.5 Women
Minimum quantity for "[VANS] Core Classic Old Skool Sneakers" is 1.
Black Classic Old Skool Sneakers by Vans featureamonochromatic design. Show off your stylish side with these sleek casual sneakers.
- Eight pairs of eyelets with white laces
အထူးပြောစရာ မလို၊ စတိုင်ကျ အကြမ်းခံ တဲ့ Vans brand Old Skool ပုံစံဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိနပ်အတွင်းအပြင် ကို Leather နဲ့ချုပ်ထားပြီး sole တွေကိုတော့ ရာဘာ နဲ့ပြုလုပ်ထားပေးပါတယ်။ ၁၀၀ % ပစ္စည်းအစစ်ကြောင်းအာမခံပြီး အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အထူးပွောစရာ မလို၊ စတိုငျကြ အကွမျးခံ တဲ့ Vans brand Old Skool ပုံစံဒီဇိုငျး ဖွဈပါတယျ။ ဖိနပျအတှငျးအပွငျ ကို Leather နဲ့ခြုပျထားပွီး sole တှကေိုတော့ ရာဘာ နဲ့ပွုလုပျထားပေးပါတယျ။ ၁၀၀ % ပစ်စညျးအစဈကွောငျးအာမခံပွီး အိမျရောကျငှခေစြေနဈဖွငျ့ဝယျယူနိုငျပါသညျ။